Mamaha olana vaovao momba ny filaminana i Google amin'ny rindrambaiko | Vaovao momba ny gadget
Ny maha mpampiasa Android anao tato ho ato dia somary sarotra ihany noho ny olana lehibe momba ny filaminana fa nijaly ny fitaovana rehetra, toy izany ny tranga, raha ny vaovao farany navoaka tamin'ny pejy fiarovana manokana, fitaovana an-tapitrisany maro no mety voan'io. Google vao nanambara ny famotsorana ireo patch maromaro izay mamaha ireo marefo rehetra ireo, ao anatin'izany ny QuadRooter, angamba no mampidi-doza indrindra.
Tokony ho ekena fa ny hafainganam-pandehan'ny injenieran'i Google dia avo dia avo, manome ny rindrambaiko miaraka amina fanatsarana izay esory ireo marefo ireo ary amboary aza ny olana mety hitranga. Anisan'ireo marefo hita, ny iray dia tokony hanasongadina ny iray izay nahafahana nanaron-doha ny maleare tao anaty sary JPEG novaina. Misaotra an'ity mpampiasa iray dia afaka nanao an-keriny an-telefaona fotsiny amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tompony tsindrio ny sary izay niraikitra tamin'ny mailaka.
Google dia nahavita namaha ny olana rehetra momba ny fiarovana hita amin'ny Android
Ny iray amin'ireo fahalemena hita sy voahitsy dia misy ifandraisany amin'ny malware calljam y Fomba fiakanjo, samy misy fanatrehana ao amin'ny Google Play tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Etsy andaniny, CallJam dia malware iray izay niantso antso tamin'ny isa premium nefa tsy nahazo alalana taminay raha toa ka afaka naka alalana tamin'ny mpitantana sy nanimba ny tambajotranay mihitsy aza i DressCode.
Farany dia te hiresaka aminao aho QuadRooter, malware mampidi-doza izay nahavita nametraka fitaovana Android efa ho lavitrisa herinandro vitsivitsy lasa izay. Aorian'ity fanavaozana farany ity dia toa tsy misy atahorana ireo terminal rehetra ireo.
More Information: Engadget
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Mamaha olana vaovao momba ny fiarovana amin'ny rindrambaiko i Google
Spotify dia mahatratra 40 tapitrisa ny mpanjifa mandoa vola